ओलीलाई एक भोट नै महंगो पर्ने
पत्रकार कृष्ण हुँमागार्इंको स्थलगत विश्लेषण
बिर्तामोड,१५ मंसीर । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणसँगै देश चुनावमा होमिएको छ । संविधान जारी भएदेखि संसदबाट प्रधानमन्त्री छान्ने चुनावदेखि स्थानीय तह, अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी दौडाहामा दलका उम्मेद्वार, नेता, कार्यकर्ता ब्यस्त छन् ।
जनतालाई भकारीमा थन्काएको धान जसरी मेरो यति मुरी छ, मेरो यति मन छ भनेर दल र उम्मेद्वारहरुले लेखाजोखा गर्दै आएका छन् । आफ्नो पल्ला भारी भएको सवैले बताउने गरेका छन् । चुनावमा म कमजोर छु, चुनाव हार्छु भनेर कसैले भन्दैन । तर जनतालाई सँधै आफ्नो भोट बैंक ठान्नेहरुले जनताको चेतनास्तर, प्रविधिको बिकाससँगै सूचनामा जनताको पहुँच बिस्तार भएको अवस्था र लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा योगदान गरेका जनता सँधै कसैका दाश हुँदैनन् । एक पटक गरेको समर्थन सर्वकालिक हुनेभए चुनावको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । तसर्थ हाम्रो जिल्लामा हाम्रै किल्ला, भनेर जनताको स्वविवेकको अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सवै जनता कार्यकर्ता होइनन्, गोप्य मतदानमा जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने नै छन् । जनता दल र दलले उठाएका उम्मेद्वारलाई रोज्न, छान्न स्वतन्त्र छन् ।
बिगतमा पाएको मत र बिभिन्न गठबन्धनबीचको मत जोडेर जीतहारको जोखाना हेर्नेहरुले जनताका बीचमा भोट माग्न रातदिन नभनि खटिनु नै नपर्ने हो नि । सिधै यति भोटले अघि छौं, देशका सवै भागमा जित्छौं भन्नेहरुले किन यति मरिहत्ते गरेको त ? चुनाव सवैका लागि त्यति सजिलो चाहीं पक्कै छैन । सवैलाई त्रास छ कि म चुनावमा पराजित पो हुन्छु कि ?
प्रसंग झापाको हो । झापाका पाँच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र १० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेद्वारहरुबीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा तर्फ कांग्रेसका विश्प्रकाश शर्मा र बाम गठबनधनबाट माओवादी केन्द्रका राम कार्कीबीच रोचक प्रतिष्पर्धा भैरहेको छ । दुवै उम्मेद्वार शालिन छन्, एक अर्कालाई गाली गलौज नगरी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
शर्मा स्थानीयवासी भएको र जन्ती मलामीमा स्थानीय जनतासँगै सुखदुखमा सहभागी भएको हुँदा जनताले आफूलाई विजयी गराउनेमा ढुक्क छन् । शर्मा ७० को चुनावमा झिनो मतान्तरले यसै क्षेत्रमा उपविजेता बनेका थिए । शर्मा अहिलेसम्म लाभको पदमा नबसेका र नगन्हाएका प्रखर युवा बौद्धिक ब्यक्तित्व मानिन्छन् । उता राम कार्की भने गठबन्धनको मतले नै आफू जित्ने बताउँदै छन् । कार्की पनि बाम बृत्तभित्र बौद्धिक भनेर छवि बनाएका नेता हुन् ।
त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेस झापाका पार्टी सभापति उध्दव थापा र एमालेकी पवित्रा निरौला खरेलका बीचमा प्रतिष्पर्धा हँुदैछ । दुवै उम्मेद्वार ७० सालको संविधासभा चुनावमा पराजित भएका थिए ।
जिल्ला बिकास समितिको संयन्त्रमा रहेर स्थानीय बिकास निर्माणमा जनताका बीचमा रहेर अहोरात्र काम गरेको हुँदा यस पटक जनताले काम हेरेर आफूलाई जिताउने थापाको बिशवास छ । आफूले चुनाव हारेर पनि बाटो, पैनी, तटबन्ध, बिद्युत बिस्तार, बृक्षरोपण, पुल र स्कूल भवन निर्माण लगायतका जनसरोकारका कममा पक्षपात नगरी काम गरेको थापाले बताए।
उता एमालेकी उममेदवार पवित्रा निरौला भने गठबन्धनको मत धेरै भएको हुँदा आफूले जित्ने दावी गर्छिन् । महिला उम्मेद्वार भएका कारण पनि आफूलाई बढी मत आउने निरौलाको दावी छ ।
त्यसैगरी क्षेत्र नं. ३ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि ज्यानको बाजी लगाएर लडेका नेता कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र जीवनभर सक्रिय राजतन्त्रका लागि कृयाशील राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन चुनावी संग्राममा छन् ।
यहाँ सिटौलाले यस अघि पटक पटक चुनाव जित्दै आएका हुन् । लगातार हार्दै आएका लिङ्देनलाई यस पटक भने बाम गठबन्धनले पञ्चायतकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालको बर्बर दमनलाई बिर्सदै समर्थन गरेको छ । कांग्रेसका शीर्ष तहमा रहेका नेता सिटौला र राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा खडा गराउने आशाका रुपमा हेरिएका लिङदेनबीचको प्रतिष्पर्धा सर्वत्र चासोको बिषय बनेको छ ।
पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदली प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त बाममोर्चा सम्मिलित जनआन्दोलनका क्रममा ०४६ साल चैत १४ गते मेची क्याम्पसमा पञ्चायतको पुतला दहन गर्ने क्रममा लिङदेनले नेतृत्व गरेको पंचायतवादी जत्थाले छुरा प्रहार गर्दा शहीद राम थापाको ज्यान गएको थियो ।
कांग्रेस नेता सिटौला भन्छन् – ‘२०४६ सालको जन आन्दोलन, ०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमासँगै काम गरेका, सँगै जेल नेल भोगेका जनआन्दोलकारी बामपन्थी साथीहरु र परिर्वतनकामी झापाका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि कस्तो चुन्ने भन्ने बिषयमा शहीद राम थापा, सुरज बिश्वास र राजन गिरीलाई साक्षी राखेर, आफ्नो अन्तरआत्मालाई सोधेर मतदान गर्नेछन् भन्नेमा म पूर्ण विश्स्त छु ।’
हुलाकी मार्गको लागि बजेट छुट्याई सडक निर्माणको काम भइरहेका, मेची लोकमार्ग, बिद्यूत, खानेपानी, बिद्यालय भवन लगायतका क्षेत्रमा अर्बौ बजेट पारेर काम समेत थालनी भएका कारण स्थानीय बिकास निर्माणमा राष्ट्रियस्तरका योजना पार्न र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि जनताले आफूलाई बिजयी गराउनेमा सिटौला ढुक्क छन् ।
त्यसैगरी क्षेत्र नं. ४ मा नेपाली कांग्रेस झापाका पूर्व उपसभापति देउकुमार थेवे र एमालेका एलपी साँवा मुख्य प्रतिष्पर्धी बनेर चुनावी मैदानमा छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रनिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै संसद्को उम्मेद्वार बनेका राजनीतिक कार्यकर्ता देउकुमार थेवे र म्यानपावर ब्यवसायी साँवा बीचको टक्करलाई त्यस क्षेत्रका मतदाताले गम्भिरतापूर्वक हेरेका छन् । साँवा यसअघि कांग्रेसका केशवकुमार बुढाथाकीसँग झिनो मतले पराजित उममेदवार हुन् ।
कुमरखोद गाबिसको निर्वाचित अध्यक्ष हुँदै जिविस संयन्त्र मार्फत स्थानीय बिकस निर्माण, कनकाई नदीमा जनताको तटबन्ध, हुलाकी सडक, बिद्युत बिस्तार, कनकाई नहरको मर्मत सम्हार, सडक ग्राभेल लगायतका काममा आफूले स्थानीय जनतासँग मिलेर सहकार्य गरेको हुँदा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको थेबेको दावी छ ।
उत साँवा पनि आफू ०७० को चुनावको घाइते भएको हुँदा जनताले यसपटक माया गर्नेमा ढुक्क छन् । आफू म्यानपावर ब्यवसायी भएपनि आफ्नो नीजि लगानीमा समेत समाजसेवामा समर्पित रहँदै आएको सावाको दावी छ ।
त्यसैगरी क्षेत्र नं. ५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका डा. खगेन्द्र अधिकारी चुनावी मैदानमा छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले पनि यो क्षेत्रलाई देशब्यापीरुपमा चासोका साथ हेरिएको छ । दोब्बर बढी मतले आफ्ना प्रतिष्पर्धिलाई हराउने दावी गर्दै आएका ओलीले ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका विश्दीप लिङदेनसँग पराजय भोग्नु परेको थियो ।
विगतमा माओवादीका सामान्य कार्यकर्तासँग हार ब्यहोर्नु परेपछि झस्किएका ओलीले आफ्नो जीत सुनिश्चितताका लागि झापामा एउटा क्षेत्र रापापालाई छोडिदिएर उसको भोट आफूलाई तान्ने प्रयत्न गरेका छन् । झापा क्षेत्र नं. ३ मा एमालेका पुष्प पोखरेरलाई टिकट दिने टुङ्गो भइसके पनि अन्तिममा आएर लिङदेनलाई छाड्नु परेकोमा एमाले कार्यकर्तामा असन्तुष्टि रहेको छ । बिगतमा एक पटक सिटौलालाई नै चुनाव हराउन सफल पोखरेलले जित्ने संभावना हुँदाहुँदै जनआन्दोलन बिरोधीलाई आफ्नो उम्मेद्वार मान्नुपर्ने स्थितिले कार्यकर्तामा असजिलो महसुस भइरहेको बताउने गरेका छन् एमालेका कार्यकर्ताहरु ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एमालेको गढ मानिएको कमल गाउँपालिकामा कांग्रेसका हुकुमसिंह राईसँग चिठ्ठा तान्नुपर्ने अवस्था आउनु, गौरादहको मेयरमा कांग्रेसले जित्नु, गौरीगञ्जमा पनि कांग्रेसकै पल्ला भारी भएको अवस्थाबाट छटपटिएका ओलीले आफू सुरक्षित रहनकै लागि राप्रपालाई झापामा एउटा क्षेत्र छोडेर कार्यकर्ताको भाग खोसेकामा एमालेजनलाई नै चित्त बुझिरहेको छैन । तर ओलीले आफ्नो जीतलाई संसारको कुनै ताकतले रोक्न नसक्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
उता कांग्रेस उममेदवार डा. खगेन्द्र अधिकारी भने बाहिरबाट आएका बिश्वदीप लिङदेनले त ओलीलाई हराए भने आफू त यहींको बासिन्दा भएकोले ओलीलाई हराउन कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएका छन् । झापाबाट मतदाता नामावली भक्तपुरको बालकोटमा सारेका ओलीलाई उनको त्यही एकभोट महङ्गो पर्ने अधिकारीले बताए । ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैंलाई भोट हाल्न पाउँदैनन् , उनको त्यही एकभोट मेरालागि बिजयको सुअवसर हुनेछ अधिकारीले बताए ।
२०७४ मङ्सिर १५ शुक्रबार ११:३३:०० मा प्रकाशित